Delestazy sy fahatapahan-jiro : tapaka mandritra ny adiny 10 ny jiro any Morondava | NewsMada
Delestazy sy fahatapahan-jiro : tapaka mandritra ny adiny 10 ny jiro any Morondava
Zary tafiditra ao anatin’ny fiainana andavanandron’ny Malagasy ny tsy fisian’ny famatsian-jiro sahaza. Mahafantatra an’izany ny mpandraharaha vahiny, tsy sahy mitondra ny volany hampiasaina eto amintsika satria tsy azo antoka aty Madagasikara.
Tsy manaitra intsony! Aman-taonany nifanesy, tsy nisy fotoana tsy nahitana delestazy na fahatapahan-jiro eto Madagasikara. Tsy indray mandeha koa fa nanome toky ny fanafoanana izany ny mpitondra isan-tsokajiny, ka toa lasa resaky ny moana sy ny marenina ny raharaha. Any Morondava, adiny 10 isan’andro ny delestazy, hatramin’ny amam-bolana maro, saingy tsy manana vahaolana ny Jirama, afa-tsy ny filazana sisa fa gropy iray ihany sisa ny mamatsy ny tanàna.
Eto an-dRenivohitra, tsy voaisa intsony ny fahatapahana mitsitapitapy, na tsy misy kotroka sy oram-baratra aza. Efa nilaza matetika ny Jirama sy ny tompon’andraikitra miahy azy fa fahatapahana ara-teknika ireny fa tsy delestazy, ka miaritra fotsiny satria tsy manan-kolazaina amin’izany ny mpanjifa satria “tsy teknisianina”.
Manampy ireo anefa, miseho vahoaka ny mpitondra sy ny Jirama milaza fa “azo sotroina ny ranon’ny Jirama, mandalo fitiliana isan’andro any amin’ny Institut Pasteur”.
Mampihemotra ny mpampiasa vola
Iankinan’ny fampandrosoana ny firenena ny herinaratra ampy. Na mora aza ny karama aty Madagasikara, amin’ny maha firenena mahantra azy, tsy maharesy lahatra ny mpampiasa vola vahiny mihitsy na efa nivalona aza ny tetezamita. Porofon’izany, mbola any amin’ny laharana faha-164 isika ao anatin’ny fandraharahana (doing business 2015) amin’ny firenena 189 maneran-tany, araka ny tatitry ny Banky Iraisam-pirenena. Niakatra kely io laharana roa io, satria faha-166 ny taona 2015. Anisan’ny singa nandaharana ny firenena ny fampidiran’ny orinasa herinaratra (188), ny famoronana orinasa (128), ny famindran-tompo orinasa (161), ny fahazoana findramam-bola (167), ny fiarovana ny mpampiasa vola madinika (105), ny fandoavan-ketra (76), sns.